Mareykanka iyo Taliban way wadahadlayaan ee Soomaalida maxaa la gudboon? - BBC News Somali
Mareykanka iyo Taliban way wadahadlayaan ee Soomaalida maxaa la gudboon?
Image caption Dagaalyahanada Taliban
Waxaa hormaro laga sameeyay wadahadaladii u dhaxeeyay kooxda Taliban iyo dowladda Mareykanka.
Wadahadaladan oo magaalada Dooxa ee dalka Qadar uga socday muddo 6 maalmood ah saraakiil ka socotay Mareykanka iyo Talibaan ayaa waxa la sheegay in labada dhinacba ay ka go'an tahay in colaadda la soo afjaro.
Dagaalka Afqanistaan ayaa qaatay muddo 17 sano ah .
Kooxda Taliban ayaa waxay diideen in wadahadalo ay la galaan dowladda Afqanistaan waxa ay taa badalkeedana ay door bidayaan in wadahadal ay si toos ah ula galaan dowladda Mareykanka.
Intii ay xukumayeen dalka Afqanistaan waxay kooxda Taliban ay mamnuuceen dhagaysiga heesaha, shaneemooyinka iyo in gabdhaha ay da'doodu tahay 10 sano iyo ka badan ay iskuulada aadaan.
"Waxaanu ka baran karnaa in wadahadal aan ugu yeerno oo dowladda ku dhawaaqdo iyo dadka imika gacanta ku haya Soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay la hadlaan Al-Shabaab, lana waydiiyo horta waxa ay rabaan, " ayuu yiri Axmed Tiir.
"In la raadiyo dowlad saddexaad oo ay xafiis ka furan karaan, hadda Taliban waxa lagula hadlayaa Dooxa waayo marnaba kuma aaminayaan wadanka gudihiisa " ayuu yiri Dr Tiir.
"Inkastoo ay ka midaysan yihiin Taliban iyo xarakada Shabab dhanka is qarxinta haddana waxay ku kala duwan yihiin fahamka guud, dowladnimada iyo sida loo dabaqayo shariicada islamka " .ayuu yiri Dr Axmed Tiir.
"Waxay leeyihiin(Taliban) arrin ku dhamaanaysa siyaasadda, marka nimankaas wax badan ayaa lagala xaaltami karaa, oo waa niman lala hadli karo, laakiin nimankan Al-Shabaab waxay u muuqdaan in aanay lahayn dano siyaasadda ku dhamaanaya " ayuu yiri.